Maxaad ka taqaan Madaxweynaha cusub ee Maamulka K/Galbeed ee Somalia C/casiis Lafta-gareen..? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaad ka taqaan Madaxweynaha cusub ee Maamulka K/Galbeed ee Somalia C/casiis Lafta-gareen..?
Waxaa magaalada Baydhaba looga dhawaaqay in C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) loo doortay madaxweynaha maamulka K/Galbeed ee Soomaaliya, kadib doorasho muran weyn ka dhashay oo maanta 19-ka Disembar 2018 ka dhacday magaaladaasi.
Haddii aan dib u jaleecno taariikhda siyaagan ay wadatay dowladda Soomaaliya ee Cabdicasiis Xassan Maxamed oo ku magac dheer Laftagareen wuxuu ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gedo, sanadkii 1970. Waana 48 sano jir.
Waxbarashadiisii dugsiga hoose, dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay isla degmada Luuq. Wuxuu Luuq ka ahaa macallin iskuul. Magaalada Muqdisho ayuu xilli danbe jaamacad ka dhigtay. Xilal badan ayuu na dowladihii dalka soo maray ka soo qabtay.
Sanadkii 2007 wuxuu ahaa maamule ku xigeenkii Furdada Xamar. Sanadkii 2008 wuxuu xukuumaddii raysal wasaare Nuur Cadde ka soo noqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. Sanadkii 2009 wuxuu xukuumaddii Cumar Cabdirashiid ka noqday wasiirka gaadiidka iyo arrimaha badda.
C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) – Madaxweynaha cusub ee K/Galbeed
Wuxuu u tartamay guddoomiye baarlamaan, isagoo iska casilay xukuumadda Kheyre, wuxuuna u tanaasulay Guddoomiye Maxmaed Sheekh Mursal. Waxaana kadib loo magacaabay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha, isagoo isaga casilay Madaxweynaha musharaxnimada K/Galbeed.
Cabdicasiis Xassan Maxamed (Laftagareen) ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed., isagoo ahaa musharax ay wataan madaxda dowladda Soomaaliya oo awood iyo dhaqaale geliyey inuu xilkan ku soo baxo.
Waa Aabe leh hal xaas iyo saddex carruur ah.
Previous articleC/casiis Lafta-Gareen oo ku soo baxay Doorashadii Madaxweynaha Maamulka K/Galbeed
Next articleKaaliyaha Madaxweyne Farmaajo oo weerar ku qaaday Cali Geedi, Digniin yaab lehna u diray Beeshiisa [Akhriso]